WEPỤ EGO NA ITUNES.COM/BILL. IHE Ị GA-EME - ITUNES - 2019
Wepụ ego na iTunes.com/bill. Ihe ị ga-eme
Mgbe enwere ike igbanye vidiyo site na ngebichi, dịka ọmụmaatụ, na usoro ị na-agafe egwuregwu kọmputa, ị nweghị ike ime n'enweghị software ọkachamara. Fraps bụ ngwá ọrụ free n'efu maka ọrụ a.
Fraps bụ ihe a ma ama maka idekọ vidio na ịmepụta screenshots, nke nwere interface dị nnọọ mfe nke na-enye gị ohere ịbanye ozugbo.
Anyị na-akwado ịhụ: Mmemme ndị ọzọ maka edekọ vidiyo site na kọmputa
Ime Nda ihuenyo
Ihe ntanetị dị iche, nke a chọrọ iji dochie ihuenyo, enye gị ohere ịkọwa nchekwa iji zọpụta ihe oyiyi, họrọ usoro nke foto zuru ezu, yana ịkọwa igodo dị ọkụ nke ga-abụ maka ọrụ maka ịmepụta ihe ntanetị.
Izizi foto ugbu a
Site na ịpị igodo dị ọkụ na usoro nke iji egwuregwu ahụ ma ọ bụ usoro ihe omume maka ịmepụta ndenye ihuenyo, foto ahụ n'egbughị oge ga-echekwa na nchekwa na kọmpụta gị akọwapụtara na ntọala.
Dị ka ihuenyo, Fraps na-enye gị ohere ịhazi ntinye vidiyo: hotkeys, ntinye vidiyo, FPS, mee ma ọ bụ gbanyụọ ndekọ ọdịyo, rụọ ọrụ ngosipụta nke kọlọtọ òké, wdg. Ya mere, ịdekọ vidio, ị ga-achọ ịmalite egwuregwu ma pịa igodo dị ọkụ ka ịmalite. Iji mezue ndekọ, ị ga-achọ ịpị otu igodo ọzọ.
Iji tọgharịa nọmba okpokolo agba kwa ụbọchị na egwuregwu gị, ihe omume ahụ na-enye taabụ "99 FPS". N'ebe a, ọzọ, a na-edebe nchekwa maka nchekwa data, nakwa dị ka igodo dị ọkụ maka ịmalite nsụgharị FPS.
Mgbe ị na-esetịpụ isi ihe dị mkpa, ị ghaghị ịmalite egwuregwu ahụ, pịa igodo dị ọkụ (ma ọ bụ nchikota ọnụ), mgbe nke ahụ gasịrị, usoro ihe omume ahụ ga-egosipụta okpokoro etiti okpukpu abụọ na akuku ihuenyo ka i wee nwee ike soro usoro egwuregwu ahụ n'oge kwesịrị ekwesị.
Na-arụ ọrụ n'elu windo niile
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, maka mma gị, Fraps ga-agba ọsọ na windo niile. Nke a na-arụ ọrụ na ndabara, ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, a ga-agbanyụ ya na taabụ "General".
Uru nke Fraps:
1. Njirimara dị mfe;
2. Ikike ịhọrọ nhazi oyiyi na FPS maka vidiyo;
3. Ekekọrịtara n'efu.
Ihe ọghọm nke Fraps:
1. Enweghị asụsụ Russian;
2. Usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere idekọ vidio ma mepụta screenshots naanị na egwuregwu na ngwa. Okwesighi idetu vidiyo vidiyo na ihe Windows.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ dị mfe nke ga-enyere gị aka ịmepụta ndenye ihuenyo ma dekọọ vidio na usoro ịgba egwu egwu ahụ, lezie anya na usoro Fraps, nke na-arụ ọrụ ya kpamkpam.
Download usoro ikpe nke Fraps
Ịmụta idekọ vidiyo na Fraps Na-amụta iji fraps Fraps: ịchọ ụzọ ọzọ Ngwọta Nsogbu: Fraps na-ewe naanị 30 sekọnd
Fraps bụ usoro bara uru maka ndị na-egwu egwuregwu kọmputa, na-enye gị ohere ịgụ ọnụ ọgụgụ nke okpokolo agba kwa ụbọchị (FPS). Ọ na-arụ ọrụ na ngwaahịa ndị dabeere na teknụzụ OpenGL na Direct3D.
Sistemụ: Windows 7, 2000, XP, Vista
Onye Mmepụta: Rod Maher
Ọnụ: $ 37
Xbox 360 njikwa console
Otu esi eji ọkwa na AutoCAD
Akwụsịghị Nchekwa Iche Iche nke Ukwu na-esote afọ ọzọ
Savefrom.net maka Yandeks.Brouser: mfe download nke ọdịyo, foto na vidiyo sitere na saịtị dị iche
Anyị Garden Rubin 9.0
N'etiti ọtụtụ arụmụka nchịkọta nke Microsoft Excel nwere ike ịrụ, n'ezie, e nwekwara ọtụtụ mmegharị. Ma, ọ dị mwute, ọ bụghị ndị ọrụ niile nwere ike iji ohere a n'ụzọ zuru ezu. Ka anyị chọpụta otú ị ga-esi rụọ ọrụ ịmepụta ọtụtụ na Microsoft Excel. GụKwuo
Ndozi njehie Windows 10 mgbe imelite
Auto Zoo IP 5.6.5.8